Hoggaamiyihii KMG ee Suudaan oo iscasilay |
Hoggaamiyihii KMG ee Suudaan oo iscasilay
Wararkii ugu dambeeyey ee lagahelayo dalka Suudaan ayaa sheegaya in Madaxa golaha milateriga ee Suudan oo qeyb ka ahaa afgembigii madaxweynihii hoere Cumar Xasan Albashiir ii iscasilay,taasi oo salka ku haysaayaa markii dadka shacabka ah ay ka soo horjeesteen xukunkiisa.
Cawad ibnu Cowf oo ahaa Wasiirkii Difaaca dalkaasi oo xilkaasi si KMG ah ula wareegay ayaa ka sheegay telefeshinka Qaranka Dalkaasi Suudan,in uu xilkaasi ku wareejiyay hogaamiye kale oo militariga ka tirsan kaasi oo lagu magacaabo Cabdulfataax Burhaan.
Sababta ka dambeysa iscasilaadiisa ayaa lagu sheeegay in ay tahay kadib markii lagu eedeeyey in uu kamid yahay dadka saaxiibada la ahaa madaxweynihii hore ee Cumar Xasan Albashiir,taasi oo ku qasabtay in uu xilka baneeyo.
War ka soo baxay saraakiisha Milateriga dalkaasi Suudaan ayaa lagu sheegay inuusan doonayn inuu awoodda la wareego, mustaqbalka Suudaanna ay go’aan ka gaari doonaan dibadbaxayaasha.
Ku dhawaad 40 qof ayaa geeriyootay tiro kalena waa ay dhaawacmeen intii uu socday kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweyne Albashiir,kuwaasi oo bilowdey bishii December ee sanadki tagay,waxaana uu ka soo bilowday sicir barar kataagnaa dalkaasi.
Hogaamiyaah iscasilay Mr Ibnu Cowf ayaa madax u ahaa sirdoonka milateriga intii ay socotay colaadda Darfur. Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay ninkaasi 2007,taasi oo hadii uu xilka sii hayo keeni kartay caqabado kale oo dalkaasi ka dhacay iyo kacdoono,balse uu xilkii wareejiyay ugu dambeyntii.